नागरिक लगानी कोषको सस्तोमा शेयर खरीद गर्ने आज अन्तिम मौका | Artha News Nepal
Home	लगानि	नागरिक लगानी कोषको सस्तोमा शेयर खरीद गर्ने आज अन्तिम मौका
by अर्थन्यूज चैत्र २, २०७७
काठमाडौं । फागुन २१ गतेदेखि लिलामीमा विक्री खुला भएको नागरिक लगानीकोषको अवितरण हकप्रद शेयरमा आवेदन दिने आज (सोमवार) अन्तिम दिन रहेको छ ।
कम्पनीले अवितरित ३ लाख ५४ हजार १५० दशमलव शून्य ५ कित्ता सर्वसाधारण तर्फको हकप्रद शेयर लिलामीमा विक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले गत पुस २८ देखि माघ १९ गतेदेखि विक्री खुला गर्दा उक्त शेयर वितरण हुने नसकेको हो ।
दोस्रो बजारमा रू. ४ हजार १२० मूल्य आइतवार कायम भएको कम्पनीको यो शेयरको न्यूनतम मूल्य रू. १०० तोकिएको छ । तोकिएको मूल्य वा सोभन्दा बढी मूल्य अंकित गरी बोलकबोल गर्नु पर्नेछ । उक्त शेयर खरीदका लागि बोलकबोल पेश गर्दा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम सम्पूर्ण कित्तासम्म माग गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
कम्पनीको शेयर विक्री प्रबन्धकमा आरविवि मर्चेण्ट बैंकिङ रहेको छ । विक्री प्रबन्धकसँगै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको विरगञ्ज, जनकपुर, चितवन, बाग्लुङ, बुटवल, रुपन्देही, बाँके, वीरेन्द्रनगर, धनगढी, कैलाली, झापा, हेटौँडा, दाङ र महेन्द्रनगरको शाखा कार्यालयमा पनि बोलपत्र बुझाउन सकिनेछ । साथै, नागरिक लगानीकोषको नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं तथा शाखा कार्यालयहरु विराटनगर र पोखरामा पनि बोलपत्र बुझाउन सकिनेछ ।
दोस्रो बजारमा आइतवार कोषको अन्तिम शेयरमूल्य रू. ४ हजार १२० कायम भएको छ । यो दिन कोषको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. १७५ ले घटेको हो । आइतवार ५१ अंकले घटेको बजारमा कोषको शेयरमूल्य पनि प्रभावित बनेको हो ।
नागरिक लगानी कोषसस्तोमा शेयर
सनराइज ब्लूचिप फण्डको ८ करोड ५० लाख इकाई विक्री खुला